नेपालमा फेसबुक सरकारले बन्द गर्दैन तर नियन्त्रण र कारबाही गर्छ ,मन्त्रि बास्कोटा , – Ranga Darpan
नेपालमा फेसबुक सरकारले बन्द गर्दैन तर नियन्त्रण र कारबाही गर्छ ,मन्त्रि बास्कोटा ,
रङ्ग दर्पण सम्वाददाता	 प्रकाशित मिति: Feb 21, 2019
फागुन ९ ,काठमाडौं- सामाजिक संजाल भरि फेसबुक बन्द गर्ने हल्ला भईरहेको बेला सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले हल्ला मात्र भयको बताएका छन्।
बिहिबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले फेसबुक ट्वीटर युट्युव जस्ता सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाइने तर त्यसलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले ऐन ल्याउन लागेको बताए ।
नेपालमा यसको बारेमा स्पस्ट कानुन छैन संसारमा जुन किसिमले प्रयोग छ ,तेसरी नेपालमा चल्न सकेको छैन । बास्कोटाले भने। हामीले फेसबुक बन्द गर्न खोजेको होइन ,तर नेपालमा जुन सामाजिक संजालमा विकृति फैलियको छ तेस्लाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ।
कयौं साइबर अपराधबारे तपाईहरुले नै लेख्नुहुन्छ, कहाँ छानविन गर्ने, कहाँ उजुरी गर्ने, कसरी कारवाही गर्ने यो केही थिएन । अब ह्याकिङ्ग हुन्छ, २४ दिन पुलिसले समात्ने छोडिदिने, त्यसबाट ब्यक्तिलाई संस्थालाई कति क्षति हुन्छ,। ती चिजहरुलाई अगाडि बढाउन खोजिएको हो ।
तर बढदो सुचना प्रविधिलाई नै रोक्ने हिसाबले कानुन आउन लाग्यो कि भन्ने छ त्यो हैन । कुनैपनि व्यवसाय चलाउन दर्ता गर्नपर्ने हुन्छ । तेसैले सामाजिक संजाल चलाउन पनि दर्ता गरेर चलाउ अन्य देशमा चलायजस्तो गरि चलाउन मिल्छ तर ‘फेसबुक, ट्वीटर जम्मै चलाउन पाइन्छ। तर त्यसको पनि व्यक्तिगत, सामाजिक र कानुनी मर्यादा हुन्छ ।
बास्कोटा अगाडी भन्छन भारत, जर्मनी, अमेरिकाको पनि कानुन हेर्नुस् नेपालको जस्तो वेतिथि छैन । यो आफैमा लाग्मर्दो विषय हो। यसलाई हामी नियत्रण गर्छौ , जताभावी चलाउने र गालि गलैज गर्नेलाई कारबाही गरेर छोड्छौ उनले भने।
‘दर्ता सम्बन्धी कुरा कुन देशमा छैन । जर्मनी, भारत लगायतका देशमा दर्ता हुदैन ? बेलायतमा दर्ता छैन ? सबै ठाँउमा दर्ता छन् । फेरि तपाईहरुले नै हरेक बर्ष १२ अर्ब ७५ करोड बाहिर गयो भनेर लेख्नुहुन्छ । त्यो करको प्रक्रियामा आएको छ ?
कसैले देशद्रोह गर्ने आवहान गरे तेस्को लागि काँह गयर उजुरी गर्ने? कसलाई गुहार्ने विश्वको खुला समाजले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न दिएजस्तै नेपालले दिएपनि जहाँ जसले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने ढंगले छुट नदिने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल र मुलधारको पत्रकारिता एउटै नभएको बताउँदै उनले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गराउन खोज्दा प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडेर व्याख्या विश्लेषण गर्नु आफैलाई धोका दिनु सरह हुने उनको भनाई छ ।
कानुन नियम हरेक देशमा हुन्छ याँहा त फेसबुकले नै देश कब्जा गर्ला जस्तो गरि लेखिन्छ। , सामाजिक संजालको प्रयोग तेही हो ? भन्दै मन्त्रि बास्कोटाले प्रश्न गरे उनि भन्छन। सामाजिक संजाल सरकारले नै प्रयोग गर्न खोजेको छ ,राम्रो छ ,तर नियम बनाएर मात्र प्रयोग गरौ।
पश्चिम नवलपरासीमा लाखौंको अवैध कपडा बरामद ,,